Queen Tatelicious has sent a message to Mai TT about her current stay in the U.K.
Muchaziva ndichisekwa kunzi Gurundoro is now stranded muUK😂😂😂😂
Better ndaichengetwa nehurumende yeUK ndiri Asylum seeker hangu.
Zvino iwe urimo mudzimba dzavanhu uchikwamatata seuchadonhedza maAsbestas😂😂😂😂
Shasha yoatedza maraini manje muUK imomo ichishora vaskana vebasa ivo varivo vanoenda kumashows.
Ko iyo face akuzvimbei???????
Asi akaiswawo mubhodhoro rekwa Mukweso😂😂😂😂😂😂😂
Usamamire paunodyira,UK takaigara haidi dzungu😂😂😂😂
Maviews haasiriwo anoita turn out kushow.
Ende ukuasheta maraini😂😂😂😂😂
MVURA HOMBE should be in 5 star Hotels not kurara
Regai ndigare hangu mubako rangu rizere mvere dzana bhoki 😂😂😂😂😂
Queen Tatelicious has sent a message to Mai TT about her current stay in the U.K. Muchaziva ndichisekwa kunzi Gurundoro is now stranded muUK😂😂😂😂 Better ndaichengetwa nehurumende yeUK ndiri Asylum seeker hangu. Zvino iwe urimo mudzimba dzavanhu uchikwamatata seuchadonhedza maAsbestas😂😂😂😂